Mowjadaha Sharciyeed ee Cagaaran. • Dawooyinka Inc.eu
Waxaa qoray Herbert M. Green - Sidee bukaanjiifka xashiishadda caafimaadku u xoojiyeen doodda adduunka xoog weyn.
Qufulyadu waa furan yihiin! Tareenka ayaa ka tagay xarunta. Jinku wuxuu ka soo baxayaa dhalada mana jirto wado dib loogu celiyo. Kordhinta Wajiyada Xannaanada Cannabis lama joojin karo kadib tobanaan sano oo gaabis ah. Laakiin, yay tahay inaan uga mahadcelino cadaadiska degdegga ah ee aan dhammaadka lahayn ee wada-tashiga in xashiishadda cannabis ay noqoto mid sharci ah oo qof walba loo heli karo? Waxaad si macquul ah u qaadaneysaa in ay ahaayeen kumanaan kun oo qof oo u ololeeya xashiishadda shaqsiyadeed ama dad aad u badan, kooxo qaran iyo caalami ahaan u shaqeynayey kooxaha u dooda cannabis, sida NORMAL of Xashiishka Yurub, yaa qaatey shuclada xoreynta xashiishka. Iyo inta badan, waad saxantahay. Sanado badan oo shaqo adag iyo adkeysi aan la adkeynin ayaa nooleeyay "riyadii cagaarneyd", laakiin waxaa jira mid kale, xitaa ka sii xoog weyn oo ka dambeeya aragtida isbeddelay ee xashiishka….
Dhaqdhaqaaqa xashiishadda cannabis asal adag
Waad aragtaa, meeshii ay dhaqdhaqaaqayaashu ku dagaallamayeen oo ay weli ugu dagaallamayaan jacaylka ay u qabaan geedka iyo xuquuqdooda shaqsiyadeed si ay uga faa’iideystaan ​​iyada oo aan wax caqabad ah iyo cadaadis ah laga helin bukaanka kula dirira wax kale; noloshooda. Waana sax sababtaas awgeed in wicitaankii loogu talagalay sharciyeeynta xashiishadda adduunka intiisa badan la siiyay. Degdeg.
Taas macnaheedu maahan in tobanaan sano oo shaqo adag oo halgamayaal ah iyo halgankoodii isdaba jooga ahaa ay noqdeen kuwo aan micne lahayn Taas bedelkeeda, shaqadaasi waxay dhidibbada u aaseysey dooda aan maanta adduunka ku hayno. Laakiin kali ahaan, bulshada udhaqdhaqaaqa ma awoodi kari laheen inay ajandaha gadaashooda si deg deg ah iyo culeys badan kuhelaan, hadii bukaanada - iyo waalidkood, marka laga hadlayo caruurta si deg deg ah ugu baahan badal caafimaad - aysan istaagin. si loo maqlo codkooda.
Aaminaad ayaa lumisay kalsoonida Big Pharma
Markii aan dhahno "bukaanno" waxaan ula jeednaa kuwa la ildaran cudurada sida suuxdin, sclerosis badan, cudurka Parkinson, glaucoma, xanuun daba dheeraada, ama dadka ku dhaca kansarka ama daaweynta HIV / AIDS.
Bukaanadan badankood waxay leeyihiin wax weyn oo ay wadaagaan; waxay ku hungoobeen "Big Pharma". Daawooyinka shirkadahani soo saaraan ma shaqeeyaan ama ma sii shaqeeyaan mana keenaan dhibaatooyin kale oo badan, sida waxyeelo daran ama dhibaatooyin ku tiirsanaan. Dabcan, inbadan waxay raadinayeen waxyaabo kale oo aakhirkii waxay heleen xasiloonida xashiishka.
Mid ka mid ah bukaanka noocaas ah, oo noqday afhayeen iyo u doodaha xashiishadda dawada, ayaa ah Chelsea Leyland. DJ-gaan Ingriiska ah, atariishada ah, halyeeyga Fashion-ka hadana u dhaqdhaqaaqa, wuxuu la xanuunsanayaa nooc suuxdin ah oo loo yaqaan 'Juvenile Myoclonic Epilepsy' (JME), oo ay la dagaallameysay ilaa yaraanteedii. Dhowr sano ka hor ayay ogaatay CBD (walax aan firfircoonayn oo laga helay xashiishadda cannabis) ilaa iyo markaa waxay gabi ahaanba iska fogeysay dawooyinka la dagaallanka suuxdinta waxayna si gaar ah ugu daaweynaysaa suuxdinteeda daweynta xashiishadda.
Maanta waxay isticmaashaa caankeeda iyo saameynteeda, sidoo kale waaya aragnimadeeda, si ay u jebiso tabta ku saabsan suuxdin iyo xashiishadda daawada.
Hadal ahaan marka laga hadlayo daabacaadda soo socota Shirka Xashiishad ee Cannabis (3C) 30 Oktoobar oo ku taal Amsterdam, Chelsea waxay la wadaageysaa taariikhdeeda nololeed, la dagaallanka suuxdinta, iyo sidoo kale waaya-aragnimadeeda iyo qaabkeeda qareenka xashiishadda caafimaadka. Haddii aad rabto inaad wax badan ka maqasho sheekadeeda xiisaha leh, booqo Shirweynayaasha Magaalada Cannabiswebsite naftaadana u kaydso maanta tigidhada. Tikidhku wuxuu sidoo kale ku siinayaa inaad marin u hesho fursado isku xirnaan weyn oo lala yeesho maalgashadayaasha xashiishka, saamileyaasha iyo ganacsatada soo kordhaysa.
Fariin / marti sharaf sharaf: Jim Belushi
James Adam “Jim” Belushi waa jilaa Mareykan ah, jilaa cod, majaajiliiste, heesaa iyo muusikiiste.
Muhiimadda berrito ee Shirka Cannabis Capital waxaa sameeyay jilaa iyo taageere xashiish ah James "Jim" Belushi. (ilaha)
Jim waa aasaasaha xashiishadda Beerta Belushi iyo u dood qayaxan oo ku saabsan astaamaha waxtar u leh geedka xashiishka. Jim wuxuu u ololeeyaa xuquuqda bukaanka iyo sharciyeynta dadka waaweyn.
Hirarka adduunka oo dhan. Maxaad ka filan kartaa Shirka Xashiishka ee berri?
WMaxaan ka baran karnaa suuqyada sharciga ah?
Wwaa ku xiga?
Mawduuca sanadkan wuxuu xoojin doonaa World Wide Wave ee sharci-dajinta cannabis, iyadoo xoogga la saarayo Yurub. Maxay dalalka kale, sida Nederland, ka baran karaan mawjaddan oo yaa ku xiga? Maxayse yihiin fursadaha maalgashi ee ay mawjadani hiigsaneyso.
Waxaan eegi doonaa shirkadaha Yurub si aan u aragno waxa ay soo bandhigayaan. Waxaan dooneynaa inaan baarno oo aan baranno sida ay u kobcaan inkasta oo ay ka shaqeeyaan aag sharci ah iyo sida ay ugu tartami doonaan uguna barwaaqoobi doonaan suuq caalami ah marka laga saaro caqabadaha. Waxaan sidoo kale diirada saari doonaa noocyada Waqooyiga Ameerika si aan ugala hadalno casharadii ay barteen.
Waxaan isku keeneynaa aqoonta maalgashadayaasha xashiishadda Waqooyiga Ameerika iyo halyeeyo waaya arag ah oo ka tirsan suuqa xashiishka Yurub shirkeenna Cannabis Capital. Marka labaad, waxaan soo bandhigi doonnaa barxad si looga wada hadlo fikradaha iyo himilooyinka kala duwan ee ka dhex jira warshadaha. Ka fikir dhaqdhaqaaqayaasha, beeralayda iyo macallimiinta dhammaantood ballaarin doona aragtidaada!
Sannadkan cusub waa Xarunta 'Pitch Lab' halkaas oo bilowgu ku soo bandhigo fikradahooda iyo fikradahooda ku saabsan soosaarka warshadaha xashiishka.
De Shirka Xashiishad ee Cannabis wuxuu dhacayaa berri, Arbacada 30 Oktoobar Amsterdam.
Berrito miyaad aragtaa
Canna-TechcannabiswaxbarashadaEuropaDhacdocaafimaadkasharci ahaansharci-dejintadaawada cawskaNederlandAdduunka oo dhan
CBD sharci ma ka tahay Mareykanka, Ingiriiska, Kanada, EU iyo Australia?
Cannabidiol (CBD) wuxuu noqday badeecad caan ka ah adduunka oo dhan oo loogu talagalay faa'iidooyinka dawadeed. Waxaa…
Weed Me, soo saaraha xashiishka Cannabis, ayaa la kulma koboc aad u weyn.
Waxay noqon kartaa wax aan caadi ahayn in badeecada shirkaddu iibiso ka hor intaanay run ahaantii ...